Ramamimampionona Gérard: “Tokony hiaraka ny lalàna sy ny soatoavina” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard: “Tokony hiaraka ny lalàna sy ny soatoavina”
“Voalohany, tokony hifanindran-dalana ny soatoavina sy ny lalàna. Haintsika ve ny mandray sy mandrindra an’izany? Tsy hoe mandeha amin’ny soatoavina malagasy dia lasa samy manao izay tiany hatao na baranahiny. Tsia.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM), Ramamimampionona Gérard, momba ny fandrafetana sy fandaniana ary fampiharana lalàna amin’izao. Soatoavina malagasy, ohatra, ny hoe: ny kely, manana ny azy; ny be, manana ny azy. Mifampitsinjo izany. Mila fantarina hoe hatraiza ny fatran’ny rariny sy ny hitsiny?
Fahaizana voalohany ilaina ny fametrahana ny lalàna mifanaraka amin’izay tena maha malagasy ny Malagasy. Izay no hoe lalàna mba tsy hahatonga zavatra hampihoa-pefy ny olona. Natao hiarovana ny ain’olombelona, ohatra, ny lalàna fa tsy natao hamono, mila apetraka sy ampiharina tsara amim-pahamarinana.
Lalàna marina no ampiharina
Indraindray, lasa fanaovana kolikoly ny fampiharana lalàna mafy loatra. Ilaina ny fahaiza-mandanjalanja tsara ny fampiharana lalàna: inona ny marina? Zava-doza raha mbola miampy kolikoly, ohatra, ny fampiharana lalàna amin’ny fananan-tany.
Lalàna marina no ampiharina ary ampiharina amim-pahamarinana sy ampitoviana ny olona rehetra. “Mila beazina ny fahaizantsika miaina ny soatoavina sy ny fahamarinana izany: inona marina ny lalàna, ahoana ny fomba iainantsika izany? Mila ampiarahana izany, fa zava-doza raha vao misaraka”, hoy izy. Mila fandanjalanjana sy fahendrena eo. Mipetraka ho arofanina ny lalàna amin’izay atao, rehefa voalamin’ny soatoavina. Tsy maintsy idirana ny lalàna, rehefa misy toe-javatra mihoapampana.